Baidoa Media Center » Dagaalo goos goos ah oo xalay Xamar ka dhacay.
Dagaalo goos goos ah oo xalay Xamar ka dhacay.
October 15, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Habeenkii xalay ahaa ayaa waxaa ka dhacay degmooyinka magaalada Muqdisho qaarkood dagaalo goos goos ah kuwaasoo aan weli la ogeyn cida wax ku noqotay.
Dagaal mudo nusa saac ah socday ayaa ka dhacay deegaanka Xoosh iyo deegaanka Kaxda oo kawada tirsan degmada Dharkeenley ayada oo ay ciidamo katirsan Xarakada Alshabaab weeraro gaadmo ah kusoo qaadeen fariisimo ay ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM halkaas ku leeyihiin.
Sida uu sheegay gudoomiye kuxigeenka degmada Dharkeenley Yuusuf Ibraahim, dagaalka ayaa ahaa mid gaadmo ah oo ay Alshabaab soo qaaday balse ay iska difaaceen.
Dhanka kale guri ku yaala deegaanka Carafaat ee degmada Yaaqshiid ayaa xalay waxaa lagusoo weeraray baasuukayaal iyo qoryaha fudud ayada oo uu iska hor imaad koobana halkaas ka dhacay.
Guriga weerarka loo geystay ayaa waxaa deganaa sarkaal katirsan ciidamada dowlada Soomaaliya balse wax qasaare ah kama aysan dhicin halkaas sida ay wararku sheegayaan.